Ny sary iray manontolo an'i Jesosy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Reko vao haingana ity tantara manaraka ity: pasitera iray niasa tamin'ny toriteny izay rehefa niditra an-tsehatra ny zanany vavy 5 taona ary nangataka ny sainy. Talanjona tamin'ny fikorontanana ity, dia nandriatra ny sarintany an'izao tontolo izao tao anaty efitrano kely izay tao an-efitranony ary hoy izy taminy: Rehefa avy nametraka ity sary ity ianao dia haka ny fotoako ho anao! Gaga izy fa niverina niaraka tamin'ny karatra manontolo ny zanany vavy tao anatin'ny 10 minitra. Hoy izy nanontany azy: tantely, ahoana no nanaovanao izany? Tsy hainao ny anaran'ireo kaontinanta sy ny firenena rehetra! Hoy ny navaliny: Ao an-damosina dia sarin'i Jesosy ary napetrako ao anaty sary ny tsirairay. Nisaotra ny zanany vavy tamin'ny sary izy, nitana ny fampanantenany, ary avy eo dia niasa tamin'ny toriteniny, izay manambara ny fizarana tsirairay amin'ny fiainan'i Jesosy ho sary manerana ny Baiboly.
Azonao jerena ve ny sary manontolo an'i Jesosy? Mazava ho azy, tsy misy sary afaka manambara ny andriamanitra feno, izay ny tarehiny dia mamirapiratra toa ny masoandro amin'ny heriny tanteraka. Afaka mahazo sary mazava kokoa momba an'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo ampahany amin'ny soratra masina manontolo.
"Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no Teny. Izy dia niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ny zavatra rehetra dia mitovy ary tsy misy mitovy, tsy misy atao namboarina » (Jaona 1,1-3). Izany no filazalazana an'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Vaovao.
Andriamanitra dia voaresaka ao amin'ny Testamenta Taloha hoe ahoana no niainan'i Jesôsy ho zanak'Andriamanitra, tamin'ny zanak'israely. Jesosy, Tenin 'Andriamanitra velona, ​​niara-nandeha tamin'i Adama sy Eva tao amin'ny Sahan'i Edena, tat later aoriana dia niseho tamin'i Abrahama izy. Niady tamin’i Jakoba izy ary nitarika ny zanak’Israely hivoaka avy tany Egypta: «Nefa tsy hamela anao aho ry rahalahy sy anabavy, tsy mahalala ny momba ny razambentsika rehetra fa tao ambanin’ny rahona ary samy nitety ny ranomasina; ary samy natao batisa tamin'i Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra, ary samy nihinana ny sakafo ara-panahy iray ihany ary samy nisotro ny fisotro ara-panahy iray ihany. fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy ireo; fa ny vatolampy dia Kristy » (1 Korintiana 10,1: 4-7; Hebreo).
Jesosy dia nambara tao aminny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao: "Ny Teny dia tonga nofo ary nonina teo amintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tokana ihany, Zanaky ny Ray, feno fahasoavana sy fahamarinana" (Jaona 1,14).
Moa ve ianao mahita an'i Jesosy miaraka amin'ny masom-pinoana ho Mpanavotra anao, ho Mpisoronabe sy zokinao? Nosamborin'ny miaramila i Jesoa mba hohomboana sy hovonoina. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy. Ny sary feno an'i Jesoa Kristy dia mitoetra ao aminao raha mino azy. Amin'izany fahatokiana izany dia i Jesosy no fanantenanao ary manome anao ny fiainany. Ny rany sarobidy dia hanasitrana anao mandrakizay.